Bossaso: 21 Garsoore oo ka trisanaa maxkamadaha gobollada Puntland oo shaqadii laga eryey. – Radio Daljir
Bossaso, May 20- Warar lagu kalsoon yahay oo ku dhaw madaxtooyada Puntland ee Bossaso ayaa tilmaamaya in 21 garsoore oo ka tirsan maxkamadaha gobollada iyo degmooyinka Puntland laga eryey shaqooyinkii garsoor ee ay hayeen.
Shaqo ka eryidda garsoonayaashaan ayaa ku soo baxday wareegto lamberkeedu yahay 56 oo shalay galinkii danbe uu soo saaray madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiraxamaan Maxamed Maxamud ‘Faroole’ taasoo loo cuskaday dhawr sababood oo la waafajiyey dastuurka dawladda Puntland sida ku cad hadal-qoraaleedka M/weynaha.
Wareegtada M/weynaha oo aan wali si rasmi ah loo shaacin ayaa lagu tilmaamay shaqo-ka-eryidda garsoorayaashan in looga golleeyahay tayeynta hay’adda garsoorka Puntland, yaraynta shaqaalaha garsoorka iyo sidoo kale qaadasho talo soo jeedin ka timid guddiga sare ee garsoorka Puntland sida qoraalkaan lagu caddeeyey.
Wararkaan oo aan ka xaqiijinnay ilo kala duwan ee xagga garsoorka iyo hay’adaha kale ee dawladda iskugu jira ayaa intaasi ku daraya, 21-ka garsoore ee shaqada laga cayriyey in ay u badan yihiin garsoorayaashii ka hawl-gali jiray degmooyinka ka dadban waddada laamiga ah gaar ahaan kuwa ka durugsan halkaasi oo dhammaan la tirtiray maxkamadihii ku yaallay.
Qaar ka mid ah garsoorayaasha shaqada laga fariisiyey oo idaacadda Daljir la soo xiriiray ayaa qiray in ay jirtay baahi loo qabay dib u habayn iyo dardargalin lagu sameeyo garsoorka, hase ahaatee waxay dhinac kale tilmaamayaan in aysan u muuqan sabab kallifi karta maxkamadihii degmooyinka qaar in la ka tirtiro ama garsoorayaal intaas le’eg hal mar shaqada laga eryo.
Wareegtada ka soo baxday xafiiska M/weynaha Puntland oo shaqada looga eryey 21-ka garsoore ayaa timid xilli in muddo ah la muujinayey dabacsanaan xagga hay’adda garsoorka Puntland ah.
Cabdifataax C Geeddi